FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PITTWEILER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pittweiler
Alika mifangaro mifangaro Rottweiler / Pit Bull Terrier
'Ity i Achilles. Ny alika mpiara-miasa amiko tsara indrindra. Izy dia lakroa teo anelanelan'ny Pit Bull sy Rottweiler. Mahery fo izy, be fitiavana sy mahira-tsaina. '
Ny Pitweiler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Rottweiler ary ny Pit Bull Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Fangaro mix Kane the Rottie / Pit Bull— 'Ity indray ilay lehilahy bikako, milanja sahabo ho 75 lbs. Aza avela hamitaka anao izany tarehy izany, mamy toy ny masony tantely izy. Lehilahy lehibe an'i mama io !! '
'Ity no zanako lahy Kane, 2 volana. Izy dia mifangaro amin'ny Rottweiler sy Pitbull. Pitbull feno rà ny reniny ary Rottweiler Alemana feno ra ny rainy. Alika mamy sy matanjaka be izy. Eto amin'ity sary ity dia nilanja 10 lbs. '
Kira the Rottweiler / Pit Bull mix (Pitweiler) amin'ny 2 taona
Shadow the Rottweiler / American Pit Bull Terrier mix (Pitweiler) amin'ny 7 volana
Deva — ny reniny dia American Pitbull Terrier ary i Dada dia Rottweiler .
Deva amin'ny maha alika kely azy - ny reniny dia American Pitbull Terrier ary i Dada dia Rottweiler .
'Ny marbra misy antsika dia 2 taona American Pit Bull Terrier / Rottweiler Alemanina mifangaro. Tena be fitiavana sy tsara fanahy izy ary alika milamina tokoa, nefa afaka ny ho antsy ary tsy milamina indraindray . Ankafiziny ny mihaza lalao kely toy ny bitro sy vorona. Alika mpiambina lehibe izy, tena tsy mivadika sy mankatò izy, tia ankizy, malemy paika amin'ny zavatra rehetra indrindra ny kilalaony sy ny biby tototry azy. Tiany ny mihazakazaka sy milalao haka araka izay azony atao, ary efa nankafy an'i Frisbee ihany koa izy. Alika tena tsara izy izay manana faharanitan-tsaina mifanaraka. Izy no alika sy namana tsara indrindra angatahan'ny olombelona. '
mpiandry ondry alemanina sy fifangaroan'ny rhodesian ridgeback
Dozer toy ny alika kely— 'Manana alika tena madio atao hoe Dozer aho. RottenPit izy. Voky ny reniny Rottweiler ary i Dada dia voky Pitbull . Dozer dia tena tsara tokoa miaraka amin'ireo fantany fa manalavitra an'ireo olon-tsy fantatra. Raha vao manafana anao izy dia ho namanao akaiky indrindra !! Lehilahy marani-tsaina izy, hainy ny fomba fitorevahana , mandeha tsara amin'ny tadiny ary miandry eo am-baravarana ary miandry anao hametraka ny sakafony izy ary tsy hikasika azy raha tsy efa lazainao fa mahazo. Vao 14 herinandro i Dozer !!! '
Dozer toy ny alika kely— 'Antsoinay hoe RottenPit' izy satria mety ho lasa haingon-trano rehefa tonga izy ireo, tiany ny milalao miaraka amin'ireo sakaizany roa Ladi, a Doberman ary Jaxs, a Min Pin . Mipetraka ao anaty miaraka aminay sy ireo sakaizany kaninina hafa izy ary matory eo am-pandriana. Dozer dia alika mahatahotra ary tena tianay izy. '
Sary Pittweiler 1
mifangaro bichon sy shih tzu
manga roan anglisy springer spaniel
Espaniôla akoho anglisy dia mandoko ny aty roan
lavaka omby alika kely terrier sary
zanak'alika st dane amidy